Warqada Muddada Koolejka ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Warqada Muddada Koolejka ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sida Loo Iibsado Waraaqaha Muddada Kulliyadda
Waa go'aan adag arday kasta oo jaamacadeed inuu go'aan ka gaaro warqadda muddada kuleejka ee ay isticmaali doonaan. Waxaa jira adeegyo aad u tiro badan oo laga heli karo khadka tooska ah oo aad kala dooran karto. Laakiin yaan lagu qaadin adeegyadooda; samee xulasho habboon. Way ka fiican tahay inaad ka iibsato warqad erey bixin ah adeeg dhab ah halkii aad isku dayi lahayd inaad la gorgortamo fulinta iibka.
Waxay noqon karaan khubaro aqoonna leh, laakiin iyaguna waa dad. Mararka qaarkood, waxay leeyihiin u janjeera inay lacag dheeraad ah ka qaadaan adeegyadooda. Marka la soco tan oo iibso kaliya markaad baarto eedeymaha oo aad barbar dhigto waxa dhabta ah ee aad ku bixinayso ilo kale. Tani waxay kaa ilaalin doontaa in lagu sasabto inaad bixiso qiimo aad u sarreeya oo ah warqad aad ugu eg tan aad horay uga soo iibsatay ilo kale.
Samee liis sax ah oo ku saabsan shuruudaha iyo xaaladaha aad u baahan tahay ka dibna tag dukaamada liistada. Haddii aad wax ka iibsanayso ilo internet ah, ka hubi shuruudaha iyo shuruudaha. Raadi inaad ka heli karto emaylkaaga oo daabac. Haddii la heli karo, la barbar dhig kuwa kale si loo hubiyo inay la mid tahay ta aad ka iibsatay meelaha kale. Ha ku khiyaanayn iibiyaha khadka tooska ah ee internetka ee isku daya inuu kuu iibiyo waraaqo aan la mid ahayn kuwa aad meelo kale ka iibsatay.
Habka ugu fiican ee lagu hubiyo inaad helayso adeeg dhab ah ayaa ah inaad hubiso taariikhda shirkaddaas. Better Business Bureau ayaa kaa caawin doona sidii aad wax uga ogaan lahayd shirkadaha noocaas ah. Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa internetka adeeg noocaas ah. Markaad aqoonsato adeegga, waad wici kartaa iyaga. Weydii su'aalo kastoo aad qabtid oo hubi inaad ku qanacsan tahay qiimaha iyo waqtiga keenista ka hor intaadan ka dalbanin warqadda iyaga.
Markaad wax ka iibsato adeeg dhab ah, waxay kuugu soo diri doonaan warqadda waqti go'an gudahood ka dib markay amarka ku meeleeyaan. Uma baahnid inaad ka walwasho inay ku lumaan boostada. Waxaa jiri doona nambarada raadraaca si aad ugala socon karto rarka meel kasta oo aad joogto iyo meesha loo geyn doono.
Sidoo kale hubi inaad wax ka iibsaneysid ganacsade sumcad leh. Weligaa ha ka iibsan ganacsade aan la aqoon. Hubso inaad ogtahay cidda aad wax ka iibsanayso iyo inay wax ku keenayaan waqtigii loogu talagalay iyo in kale. Markaad wax ka iibsato khadka tooska ah, waxaa jiri doona cinwaan dalwad ah oo la bixiyo laakiin way fiicantahay haddii aad u wici karto oo aad ogaan lahayd cidda aad wax ka iibsanayso.
Waraaqaha ereyada kulleejku waa qaali. Ha ka iibsan waraaqo jaban kuwa khiyaaneeya. Dhib malahan in warqaddu ku jirto internetka ama dukaanka. Waa inuu ku kala duwanaadaa qiimaha iyo tayada labadooda. Khiyaanadan wuxuu isku dayi doonaa inuu kaa iibiyo warqada raqiiska ah ka dibna wuu baaba'ayaa isagoon raad lagaa qaadin oo kaaga dhigaya mid sare oo qalalan
Sidoo kale ka taxaddar inaad doorato dukaan sumcad wanaagsan ku leh. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka iibsato ganacsade caan ah. Sidan, waxaad ku baran doontaa bakhaarka ku yaal gudaha. Haddii aad wax khalad ah ku aragto warqadda ka dib iibsiga, ka dibna waxbadan oo dhan isla markiiba iska daadi. Fursadaha ayaa ah, waxaad heleysaa shey been abuur ah.
Hubso inaad ogtahay dhererka warqadda saxda ah intaadan iibsan. Ganacsatada qaar waxay leeyihiin ugu yaraan qaarna waxay leeyihiin dherer ugu badnaan. Ka taxaddar oo ha u tanaasulin faahfaahintaan. Haddii ganacsaduhu aanu ku siin karin jawaab sugan, markaa iska tag.
Ugu dambeyntiina, kahor intaadan iibsan, hubi siyaasadda soo noqoshada ee ganacsadaha. Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa ka hor intaadan lacagtaada dib u helin? Lacag celinta ma la wareejin karaa? Haddii kale, markaa waa inaad ka fogaataa iibiyaha. Tani waxay kaa badbaadin doontaa dhib badan markii dambe. Waxaad ku baari kartaa tan shabakadda.
Hadal kooban, si aad u iibsato warqad ereyga kuuliyadda ma adka. Haddii aad raacdo qodobbada kor ku xusan, markaa wax arrimo ah kama hor imaan doontid. Had iyo jeer wax ka iibso ganacsatada caanka ah. Iibso khadka tooska ah iskana gudub hubinta xaqiiqada websaydhka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad wax uun ka iibsato meel aamin ah oo aanad la kulmin wax arrimo ah.